Gallery – Sakura Hospital
အစာအိမ် မှန်ပြောင်း ကြည့်ရှူ စစ်ဆေးခြင်း
အစာအိမ် မှန််ပြောင်းကြည့်ရှူ စစ်ဆေးခြင်း ဆိုသည် မှာ ဗီဒီယိုကင်မရာ တပ်ဆင်ထားသော ရှည်လျားသေးသွွယ် သည့် ပိုက်ပြွန်လေးဖြင့် အစာရေမြို၊ အစာအိမ် နှင့် အူသိမ် ဦးပိုင်း ကို ကြည့်ရှူ စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စစ်ဆေး သင့် သည့် သူများ……. မကြာခဏ အစာအိမ် အောင့်ခြင်း ၊ ရင်ပူခြင်း အကြောင်းရင်း ရှာမရ ဘဲ သွေးအားနည်း ခြင်း အကြောင်းရင်း ရှာမရဘဲ ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းလာခြင်း အစားနည်းလာခြင်း သွေးအန်ခြင်း ၊ သွေးဝမ်းသွားခြင်း အစားအစာ မျိုရ ခက်ခြင်း အသက် (၅၀) ကျော် မှ စ၍ မကြာခဏ အစာမကြေခြင်း မိသားစု တွင် အစာအိမ်ကင်ဆာ မျိုးရိုးရှိသူများ [...]
အစာအိမ် မှန်ပြောင်း ကြည့်ရှူ စစ်ဆေးခြင်းadmin2020-03-17T08:39:44+00:00
ဆာကူရာ ဆေးရုံ ၏ MO AMO များ လစဉ် CME ပြုလုပ်၍ ဆေးပညာပိုင်းဆိုင် ရာ များ ဆွေးနွေး ဖလှယ် နေကြပုံ များ
ဆာကူရာ ဆေးရုံ ၏ MO AMO များ လစဉ် CME ပြုလုပ်၍ ဆေးပညာပိုင်းဆိုင် ရာ များ ဆွေးနွေး ဖလှယ် နေကြပုံ များadmin2020-03-17T08:41:40+00:00
သင့်သွား မညီ လို့ စိတ်ပျက်နေပါ သလား
ယုံကြည်မှု အပြည့်နှင့် လှပသော ပြုံးအလှ ပိုင်ရှင် များ ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ သွားညှိအထူးကု ဆေးခန်းကို Sakura Hospital ရှိDental Clinic တွင်ဖွင့်လှစ် လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ အောက်ပါ သွားညှိကုသခြင်း အမျိုးမျိုး အား ထိုင်း နိုင်ငံ Mahidol University မှ သွားဘက်ဆိုင်ရာ (သွားညှိကုပညာ) မဟာသိပ္ပံ ဘွဲ့ ရ သွားညှိအထူးကု ထံတွင် ကုသမှု ခံယူနိုင် ပြီဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ မေးရိုးဖွံ့ဖြိုးစေရန်ကုသခြင်း သွားညှိကုသခြင်း သွားညှိကု နှင့် မေးရိုးခွဲစိတ်ကုသခြင်း နှုတ်ခမ်းကွဲ ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ် များတွင် သွားညှိကုသခြင်း သင့်မိသားစု [...]
သင့်သွား မညီ လို့ စိတ်ပျက်နေပါ သလားadmin2020-03-17T08:43:04+00:00
Specialist OPD Servicesadmin2017-11-16T21:09:16+00:00
Our Pharmacy Department provides fast and well-stocked 24 hours service. Plus, we have variety of medical products with reasonable price and reliable quality. You'll appreciate how our expert pharmacists take the time for one-on-one instruction about medicines.
Intensive Care Servicesadmin2017-11-16T21:37:44+00:00
Information And Registration Servicesadmin2018-02-24T07:59:53+00:00